အဆိုပါခရီး High Quality အွန်လိုင်းအတွေ့အကြုံများဆီသို့ - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » High Quality အွန်လိုင်းအတွေ့အကြုံများဆီသို့အဆိုပါခရီး
High Quality အွန်လိုင်းအတွေ့အကြုံများဆီသို့အဆိုပါခရီး
Author: Bitmovin မှာ Stefan Lederer, CEO နဲ့ပူးတွဲတည်ထောင်သူ
ကျနော်တို့တှငျနထေိုငျအဆိုပါ Multi-Screen, Multi-Platform ကိုကမ္ဘာကအကြောင်းအရာစားသုံးသူ '' ကြည့်ရှုအတွေ့အကြုံများ၏အဆင်ပြေစေရန်သိသိသာသာတိုးပွားလာခဲ့သည်။ ပရိသတ်များအတွက်ယခုစားသုံးသူကိုမဆိုအကြောင်းအရာကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုတဲ့စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်အရှည်ရုပ်ရှင် feature မှမဆိုရာအရပ်ကိုတိုက်ရိုက်အားကစားကနေအရာရာကိုကြည့်သည့်အချိန်တွင်မဆိုနိုင်ပါ။ လူကြိုက်များ streaming များကယ့်ကိုဘယ်လောက်မှသေတမ်းစာအဖြစ်ယခုနှစ်ရဲ့ Super Bowl streaming များအသစ်မှတ်တမ်းများကိုဖဲ့။ 7.5 သန်းထူးခြားတဲ့ devices တွေကိုဂိမ်းထုတ်လွှင့် - ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ဂဏန်းအပေါ်တစ်ဦး 20% တိုး။ ထို့အပြင်အကြောင်းအရာနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအဆင့်ဆင့်ထိုကဲ့သို့သော Netflix နှင့် Hulu တုန်လှုပ်စေသောဖြစ်သကဲ့သို့အဓိက SVOD ကစားသမားများကတက်ဝတ်ပြုကြ၏။ 2018 ၏စတုတ္ထသုံးလပတ်အဘို့, Netflix ဟာကဆက်ပြောသည် အမေရိကန်အတွက်၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှု 1.53 သန်းပေးဆောင်တဲ့ subscribers 2018 ၏နောက်ဆုံးသုံးလပတ်မှာ, Hulu မကြာသေးမီကရောက်ရှိခဲ့စဉ် 25 သန်းပေးဆောင်တဲ့ subscribers
US မှာ streaming များကဗီဒီယိုအကြောင်းအရာလျင်မြန်စွာကြီးထွားပရိသတ်တွေတီဗီ set ကိုလှည့်ပတ်စုရုံးမယ်လို့သည့်အခါလက်ထက် မှစ. ကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျော်လွှားဖို့လိုကြောင်းစိန်ခေါ်မှုများနေဆဲရှိပါတယ်။ ၎င်း၏အကောင်းဆုံးမှာတိုက်ရိုက်စီးအမှန်ကြည့်ရှုသူ immerses ကြောင့်အရည်အသွေးမြင့်ရိုက်ကူးမကယ်မလွှတ်နိုင်။ သို့သော်၎င်း၏အဆိုးဆုံးမှာစီးစိတ်ပျက်တစ်ခုအစွန်းရောက်အရင်းအမြစ်ဖြစ်နဲ့ viewer ရဲ့အွန်လိုင်းအတွေ့အကြုံဖျက်ဆီးနိုင်သည့်, pixel နှင့်ကြားခံနှင့်အတူနှောငျ့နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအကြောင်းအရာစက်မှုလုပ်ငန်းဤပြဿနာကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်ကဲ့သို့တူညီသောအရည်အသွေးကိုဖြစ်ကြောင်းစီးအပ်ထားတဲ့ ပို. ပို. ရှုပ်ထွေးသောယှဉ်ပြိုင်ရှုခင်းကနေသူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ခွဲခြားရန်အားထုတ်မှုအတွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ developer များကဒီအောင်မြင်ရန်အတွက်ကူညီရာတွင်ဗဟိုအခန်းကဏ္ဍပါလိမ့်မယ်, သူတို့သုံးမူလတန်းနည်းပညာများအာရုံစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
VOD များအတွက်အရည်အသွေးမြင့်သပ္ပါယ် streaming များ
နည်းပညာခဏကြီးမားသော SVOD ကစားသမားအားဖြင့်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်နေစဉ်, စက်မှုလုပ်ငန်းများစွာပုံမှန်အားဖြင့်လျှောက်လွှာများအတွက်အသုံးပြုသောဘစ်နှုန်းတစ်အစိတ်အပိုင်းမှာ, high-definition content ကိုမကယ်မလွှတ်မှသပ္ပါယ် streaming များလုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့မရှိသေးပါ။ Per-ခေါင်းစဉ် Encoding ကိုခေါ်ဤလုပ်ငန်းစဉ်, အခြေခံအားဖြင့် optimized ဘစ်နှုန်း / resolution ကိုပေါင်းစပ်င်တစ်ဦးစားပွဲပေါ်မှာဖြစ်သည့်ဘစ်နှုန်းထားလှေကား, တွက်ချက်ရန်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုရှုပ်ထွေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအသုံးပြုသည်။
သို့သော်ဤလွယ်ကူသည်ပြုမိထက် said: အများဆုံးဗီဒီယိုကို-related န်ဆောင်မှုများနေဆဲအကြောင်းအရာ-based ပိုမိုကောင်းမွန်ရေးလျှောက်ထားခြင်းမရှိဘဲငြိမ်ဘစ်နှုန်းလှေကားကိုအသုံးပြုပါ။ ထိထိရောက်ရောက် Per-ခေါင်းစဉ် Encoding အသုံးချစေရန်, developer များရိပ်မိရုပ်ပုံအရည်အသွေးနှင့်ဘစ်နှုန်းအကြားအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောဆက်စပ်မှုကိုသိရှိနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်, သူတို့ဤမက်ထရစ် fit မှအကြောင်းအရာပိုကောင်းအောင်။ စံ encoding က profile များကိုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဤချဉ်းကပ်မှုသိသိသာသာ, ပုံရိပ်အရည်အသွေးမဆိုအပေးအယူမရှိဘဲဘစ်နှုန်းလျော့နည်းစေသည်။
ဒီနည်းပညာနှင့်အတူ, အမေရိကန်တစ်ဝှမ်းလုံးကိုအရွယ်အစား၏အဖွဲ့အစည်းများအကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးရှိသမျှတစ်ခုတည်းအပိုင်းအစများအတွက်စားသုံးသူအတွေ့အကြုံအပေါ်အထွေထွေတိုးတက်မှုအတွက်ရရှိလာတဲ့, သူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုပိုကောင်းအောင်နိုင်ပါလိမ့်မည် - အင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်ထဲကနေတိုက်ရိုက်အားကစားမှတဆင့်။
ကျနော်တို့မကြာသေးမီက '' ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်စဉ်ဖြန့်ချိဗီဒီယိုကိုရေးသားသူအစီရင်ခံစာ'အရာငါတို့သည် 450 ဘို့မိမိတို့အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဒေသများအကြောင်းကိုသူတို့ကိုမေးရန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 2019 developer များကျော်မေးမြန်းထားသည်။ ကျနော်တို့အောင်းနေချိန်, မခွဲခြားဘဲသူတို့ရဲ့တည်နေရာ 2018 ဗီဒီယို developer များအဘို့အမြန်နှုန်းမြင့်ကွန်ရက်များသို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်မှုဧရိယာမှဝင်ရောက်ခွင့်အကြီးမားဆုံးပြဿနာဖြစ်ခဲ့သည်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
တိုက်ရိုက်အားကစားပွဲတစ်ပွဲအွန်လိုင်းဗီဒီယိုများအတွက်အများဆုံးစိန်ခေါ်မှု application ဖြစ်ပါတယ်: လှုပ်ရှားမှုကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပါသည်, တစ်ဦးချင်းစီသည် frame ယခင်တစ်ဦးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အပိုဆောင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပေးသွားမှာပါဆိုလိုတာက; နှင့်ပရိတ်သတ်များအရည်အသွေးမြင့်မျှော်လင့်။ အဲဒီနှစျခုစိန်ခေါ်မှုများကာတွန်းကဲ့သို့အခြား application များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အင်တာနက်ကိုကျော်ကိုစေလွှတ်ခံရဖို့လိုအပ်ကြောင်းအချက်အလက်များ၏ပမာဏကိုတိုးမြှင့်ဖို့ပေါင်းစပ်။ သို့သော်ကွန်ယက်စွမ်းရည်အလားအလာပြန်လည်တည်ဆောက်ထားကြောင်း၎င်းတို့၏လမ်းပေါ်မှီဝဲတဲ့ packets တွေကိုအတွက်ရရှိလာတဲ့, ကနျ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ထို့နောက်တိုက်ရိုက်အစီအစဉ်အတွက်လက်ခံနိုင်ဖွယ်မဟုတ်သောအရာ, ကြားခံသို့လှည့်။
ငါတို့အဘို့အ, အဖြေလည်းအရည်အသွေးမြင့်၏ဗွီဒီယိုကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနေတုန်းအောင်းနေချိန်လျှော့ချ, Real-time အတွက် setting များကိုချိန်ညှိကြောင်းထိရောက်သောဗီဒီယိုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖြေရှင်းချက်စေလွှတ်တည်ရှိသည်။ ဤသည်အထူးသဖြင့်ကိုယ့်ကိုသူတို့ပင် touchdown ကိုမြင်ရပါတယ်မတိုင်မီသူတို့တသမတ်တည်းတွမ် Brady ဘို့မိမိတို့နောက်တံခါးကိုအိမ်နီးချင်း၏ရူ့ကိုကြားလျှင်စိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်မဟုတ်ဘူးသေချာပါတယ်သူကိုအွန်လိုင်းတိုက်ရိုက်အားကစားစောင့်ကြည့်သူအများအပြားပရိတ်သတ်တွေ, စိတ်တော်ပါလိမ့်မယ်။
AV1 နှင့် Multi-codec ကိုကမ္ဘာက
သစ်တစ်ခု codec ၏ပစ်လွှတ်အမြဲခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်စေသည်။ သို့သော် AV1 အကြောင်းရင်းနှစ်ခုထွက်မတ်တပ်ရပ်: ကစျေးကွက်အပေါ်ထဲကအများကြီးပိုမြန်မဆိုအခြားဖြေရှင်းနည်းထက် UHD ကို process မှအခိုင်အမာနှင့်မူပိုင်-အခမဲ့ခဲ့သည် - ထိရောက်စွာဆန်းသစ်တီထွင်မှုများအတွက်ကစားလယ်ပြင်ထွက်အခုလဲနှင့်သေးငယ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများစက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ခွင့်ပြု သူတို့ရဲ့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုမှတဆင့်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ '' ဗီဒီယိုရေးသားသူအစီရင်ခံစာ '၌စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတလုံးကိုဖြေဆိုသူနီးပါးတတိယနှင့်အတူ codec ကိုချထားပြီးဆော့ဖ်ဝဲရေးရည်ရွယ်ချက်အတွက်မြင့်တက်ခဲ့သည်။ ဤသည်ကထိုကဲ့သို့သော H.14 နှင့် HEVC အဖြစ်ထူထောင်ကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများရန်အလေးအနက်ပြိုင်ဘက်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်အစီရင်ခံစာစီစဉ်ထားပါသည် (264 ရာခိုင်နှုန်း) ၏နှစ်ဆကျော်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပထမဦးဆုံးကျယ်ပြန့်စျေးကွက် codec ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်ကလေးမွေးစားခြင်းကစတင်ခဲ့သည်စဉ် Compute အရင်းအမြစ်များကုန်ကျစရိတ်ပျံ့နှံ့ဖို့ပံ့ပိုးပေးဖွင့်, ပထမဦးဆုံးပရီမီယံ VoD န်ဆောင်မှုများထွက်သည်လှိမ့်လိမ့်မည်။ သို့သျောလညျး, အဲဒါကိုသည်အခြားကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများကိုအစားထိုးလိမ့်မည်ဟုပြောစောလွန်းဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးအကြောင်းအရာပံ့ပိုးပေးကွဲပြားခြားနားသောကးများအတွက်အကောင်းဆုံးအဖြေကို select အဖြစ်ယေဘုယျအား 2019 multi-codec ကိုကမ္ဘာကြီးဆီသို့လမ်းကြောင်းသစ်အရှိန်အဟုန်မြှင့်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီနှစ်မှာတော့ကျနော်တို့ကိုပိုပြီးတိုက်ရိုက်အားကစားပရိသတ်တွေဖမ်းယူမည်ကိုမျှော်လင့်, ပိုမိုစတူဒီယိုတိုက်ရိုက်-to-စားသုံးသူအွန်လိုင်း streaming များန်ဆောင်မှုစတင်မည်နှင့်လူမှုရေးကဗီဒီယိုကြီးထွားဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ လျှော့အောင်းနေချိန် မှစ. ရွေးချယ်ဖို့ codec ကိုရွေးချယ်စရာတစ်ခုကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးနှင့်အတူပိုကောင်း encoding ကပေါင်းစပ်ပြီးအသုံးပြုပုံမီဒီယာစက်မှုလုပ်ငန်းအမှန်တကယ် linear ထုတ်လွှင့်အပြိုင်တစ်ခုအွန်လိုင်းဗီဒီယိုအတွေ့အကြုံကို၏ဂတိအပေါ်မကယ်မလွှတ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
2015 Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia အထောက်အပံ့ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC စွဲငြိဖွယ်ရာ isovideo JCT-VC ကို ဆူညံသံလျော့ချခြင်း UHD / 4K / HD ကို က Ultra HD ဖိုရမ် viarte ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် virtual reality Warsaw ကို	2019-04-24
ယခင်: NVIDIA CUDA-Accelerated လုပ်ငန်းအသွားအလာသည်အနီရောင်R3D® SDK ကို Now ကိုရရှိနိုင်
နောက်တစ်ခု: Stream အကြှနျုပျ၏ပွဲနှင့်အတူမိတ်ဖက်အတွက် TNW2019 မှာပါဝါ TNW တီဗီစတူဒီယိုမှ LiveU,